Posted by ကို Tranquillus | ဖေဖော်ဝါရီလ 4, 2021 | ရေးသားပါးစပ်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု
ဒီနေ့ခေတ်မှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်လောကမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်လေ့ရှိပြီးမကြာခဏလျစ်လျူရှုခံထားရတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဟာ "ဘယ်လိုရေးရမယ်ဆိုတာကိုသိခြင်း" ပဲ။ ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်မကြာခဏမေ့သွားသောအရည်အသွေးတစ်ခု
သို့သော်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဤကျွမ်းကျင်မှုသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ထူးခြားစေနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်လာသည်။ ဥပမာအားဖြင့် HRD နှင့်လဲလှယ်ခြင်းကိုစဉ်းစားပါ။
« ယနေ့စီစဉ်ထားသည့်စုဆောင်းမှုအတွက်သင်သည်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ် ဦး ကိုရှာတွေ့ပြီဖြစ်သည် ?
- ကျွန်ုပ်တို့သည်စမ်းသပ်မှုများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ထပ်တူအတွေ့အကြုံနှင့်ယှဉ်ပြိုင်သူနှစ် ဦး ရှိခဲ့သည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးဒီအနေအထားအသစ်ကိုစတင်ရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။
- ၎င်းတို့အကြားဆုံးဖြတ်ရန်သင်ဘာလုပ်မည်နည်း ?
- ဒါရှုပ်ထွေးမဟုတ်ပါဘူး ! ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အနက်မှအကောင်းဆုံးစာအရေးအသားကိုသုံးနိုင်သည်ကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မည်။ »
သံသယဖြစ်လျှင်အကောင်းဆုံးကိုရေးသားသူအား ဦး စားပေးသည်။
အထက်ပါဥပမာသည်စာရေးခြင်းအားမည်သို့စုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အရည်အချင်းမပြည့်မှီကြောင်းကောင်းစွာဖော်ပြသည်။ သင်သည်မည်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်မဆိုကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေကောင်းမွန်သောအရေးအသားရှိခြင်းကလူတစ် ဦး အားအခွင့်အလမ်းအချို့ကိုရယူနိုင်စေကြောင်းအတွေ့အကြုံကပြသသည်။ ထို့ကြောင့်သူ၏အရေးအသားအရည်အသွေးသည်ထူးခြားသောကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ငှားရမ်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ နောက်ထပ်တရားဝင်မှုကိုပေးသော element တစ်ခု။ စုဆောင်းရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကဤအချက်ကိုထောက်ခံသည်။ တူညီသောကျွမ်းကျင်မှုရှိပါကအကောင်းဆုံးရေးသားသူကိုငှားပါ »။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ် ဦး ၏အရေးအသား၏သဘောသဘာဝကိုသူအလုပ်အားသူလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ဂရုစိုက်မှုကိုဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ စုဆောင်းသူများကိုလစျြလြူရှုမထားဘူးသောဝိသေသ။
အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှု - မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခု
စာရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် စာရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုပါ။ စာပို့စာပေးစာယူ၊ အစီရင်ခံစာ သို့မဟုတ် ပုံစံတစ်ခုပင်။ ထို့ကြောင့် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ အဖွဲ့အစည်းကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ ထို့အပြင်၊ စာရေးခြင်းသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝတွင် ထပ်တလဲလဲဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် အီလက်ထရွန်းနစ်မေးလ်သည် မည်သည့်လုပ်ငန်းတွင်မဆို မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ဖြစ်လာနေသည်။ အထက်အောက်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအကြား သို့မဟုတ် ဖောက်သည်များနှင့် ပေးသွင်းသူများကြား အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုများ။ ထို့ကြောင့် ကောင်းစွာရေးသားခြင်းသည် လုပ်ငန်းရည်ညွှန်းစနစ်များတွင် ရှားရှားပါးပါး တွေ့ရသော်လည်း လိုချင်သော ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောမေးခွန်းများသည်အတော်အတန်တရားဝင်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုတွင်အရေးအသားနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာနှစ်ခုရှိသည်။
ငါတို့မှာပထမရှိတယ် ပုံစံ အထူးဂရုစိုက်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ရာ စာအရေးအသား, မှာorthographe, ဒါပေမယ့်လည်းရန်အတွေးအခေါ်များကိုဖွဲ့စည်းခြင်း။ ထို့ကြောင့်သင်၏အရေးအသားတစ်ခုချင်းစီသည်တိကျမှုနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မာတိကာ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့မဟုတ်သာလွန်သောလက်ဖြင့်ရေးသားခြင်းကိုသင်လုပ်နိုင်သည် သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ရမည်။ ၎င်းသည်ရေးသားရန်အတွက်ရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ဖတ်ရန်နှင့်နားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ မင်းလိုပဲဘယ်သူမှဖြုန်းတီးဖို့အချိန်မရှိဘူး။
ဖတ်ရန် သံချပ်အဆုံးသတ်၍ ယဉ်ကျေးသောဖော်မြူလာကို စွန့်လွှတ်ပါ။
ကောင်းစွာရေးသားခြင်း, မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှု! မတ်လ 5, 2021Tranquillus
အောက်ပါTeleworking ကိုအားဖြည့်ခြင်း - အလုပ်ရှင်များအတွက်အမှန်တကယ်အန္တရာယ်ကဘာလဲ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အီးမေးလ်ကို စာတစ်စောင်နှင့် ခွဲခြားပါ။
အီးမေးလ်က template ကိုအစည်းအဝေးတစ်ခုရှိ၎င်း၏ပါဝင်မှုကိုကြေညာရန်